“ ဆယ်ပုဒ်မြောက်၊ နှုတ်ဆက်ပြီ နဲ့ သူကြီးအိမ်မှ ထိပ်တုံး ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ ဆယ်ပုဒ်မြောက်၊ နှုတ်ဆက်ပြီ နဲ့ သူကြီးအိမ်မှ ထိပ်တုံး ”
“ ဆယ်ပုဒ်မြောက်၊ နှုတ်ဆက်ပြီ နဲ့ သူကြီးအိမ်မှ ထိပ်တုံး ”
Posted by Swal Taw Ywet on Mar 15, 2012 in Creative Writing, Think Different | 24 comments
Best. Better Mandalay gazette Rule
ဒီပို့စ်လေးဟာ ကျနော့်ရဲ့ ဆယ်ပုဒ်မြောက် ပို့စ်လေးပါ။
စာဖတ်သူအဖြစ်သာ ပြန်ဆင်းနေတော့မှာမို့ ကြိုတင်လက်ပြ နှုတ်ဆက်တာပါနော…
မန္တလေးဂေဇက်ရွာကြီးမှာ ရင်ဘတ်နဲ့ရေး၊ ရင်ဘတ်နဲ့ ဖတ်ကြတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်တွေ Comment တွေဖတ်ရင်းက ရင်ချင်းငြိပြီး မန္တလေးသားကျနော် ၀င်ရေးဖြစ်ခဲ့တာပါခင်ဗျ။ ရွာသားပေါ့လေ..
ဒါပေမယ့် ရွာထဲမှာ မျက်နှာပူစရာ လေထိုးလေလျော်သမားတွေကို တွေ့တွေ့နေရတော့ ရွာ့ကိုယ်စား ရင်နာမိလို့ ဒီနှုတ်ဆက်စာစုလေး ရေးဖြစ်သွားတာပါ။
ကျနော် ပို့စ်တစ်ခုကို ဒီလိုခေါင်းစဉ်တပ်မယ်ဗျာ..
(Hot Item မို့ လူတိုင်းလိုလို ၀င်ဖတ်ကြမှာသေချာတယ်)
စာသားကို ဒီလိုလေးဘဲ ရေးပေးမယ်…
စု မြင်လိုက်ရ (?)
မက်မက်စက်စက်ကို လှနေပါပကော…. ။ ။
ကိုးနတ်ရှင် မျက်နှာသာပေး မှာ လေးကို တမေ့တမောစောင့်ပြီး မျှော်လင့်တကြီး ၀င်ဖတ်မိတဲ့ စာဖတ်သူ မျက်နှာကို ဖြတ်ရိုက်လိုက်တာမျိုး ဖြစ်သွားပြီဟုတ်?
ဒီရွာထဲမှာ အဲဒီ့လိုရေးတဲ့သူတွေ ရှိနေတာ ရွာ “ နာ ” တယ်လို့ ခံစားနေရလို့ပါခင်ဗျာ ။
ကျနော့်ခံစားချက်မမှားဘူးထင်လို့ သူကြီးအိမ် မှာ အဲဒီ့လိုလူတွေအတွက် ထိပ်တုံးတစ်ခုလောက် ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ ၀ိုင်းပြီးဆောက်ပေးခဲ့ချင်လို့ပါ။
ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တွေ ကျင့်သုံးတတ်အောင် ဒီဂေဇက်ရွာကြီး တည်ပေးထားပြီး အလေ့အထ ရစေတဲ့ သူကြီးကို
“ Poll လေးတစ်ခု အရင် လုပ်ပေးဖို့ ”တောင်းဆိုချက်ပါခင်ဗျ။
ရွာသူရွာသားတစ်ယောက်ဟာ ကလောင်တစ်ချောင်းပိုင်တာမို့ သူရေးချင်ရာ ရေးခွင့်ရှိပါတယ်။ ကြိုက်သလိုရေးပါ သူ့အိမ်မှာ။
ဒါပေမယ့် ရွာရဲ့ မျက်နှာစာပေါ်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ ကျန်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ ပတ်သက်လာပါပြီ၊ ထိန်းသိမ်းသင့်ပါပြီခင်ဗျ။
အဲဒီ့ကလောင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ဗီဇ စရိုက်အရ မူးတိုင်းအော်ဆဲနေရင် ( ရွာလမ်းမပေါ် ဟို …ဒါရိုက်တာကြီးလိုရောက်လာရင်) ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ point of view ကနေ ကြည့်ချင်ပါတယ်။
နိုင်ငံကြီးသားပြီသအောင် ပြန်မဆဲသင့်ဘူးဆိုတာ လက်ခံပေမယ့် နားမခံသာတဲ့ ရွာသူရွာသားတချို့က ပြန်ဆဲချင်ကြမှာဘဲ။ (တကယ်လည်း ပြန်ဆဲကြလို့ သူကြီးတောင် မောင်းထုပြီး ဟန့် ထားခဲ့ရတယ်.. ဟုတ်?)
MG ရွာကြီးထဲမှာ ရွာသူရွာသားတွေသာမက တစ်ခြားက ဧည့်သည်တွေပါ လာရောက်လည်ပတ် လေ့လာနေကြတာမို့ အပြင်လူတွေရှေ့မှာ မျက်နှာပူနေရတဲ့ ရွာသားတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကူးလေးပါခင်ဗျ။
အဲဒီ့လို ရမ်းကားတတ်တဲ့သူကို ထိပ်တုံးခတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျနော့်စိတ်ကူးလေးက ဒီလိုပါ။
19.12.2011 နေ့စွဲနဲ့ ဆရာသစ်မင်းတင်ထားခဲ့တဲ့ “ ရွာကို ကောင်းအောင်တည် ကြည့်ကြစို့ ” ပို့စ် ကို ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြတဲ့ comment တွေမှာကတည်းက Thumb Up/Thumb Down နဲ့ လုပ်မလား? Green/Red နဲ့လုပ်မလား ဆိုပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်နော်။ အဲဒီ့လက်မလေး တွေနဲ့ အနီအစိမ်းတွေက မည်သူမဆို (၀င်ဖတ်သူတိုင်း) နှိပ်ခွင့် ပြောင်းခွင့်ရှိနေလို့ Reliable မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး ရပ်သွားခဲ့ရတာ။
ကဲ တစ်ယောက်ယောက်က Member တစ်ယောက်(ဥပမာ စွယ်တော်ရွက်) ဟာ ရွာထဲမှာ အနှောင့်အယှက် ပေးနေသူပါဆိုပြီး
ဗျိုးဟစ်တဲ့ ပို့စ်တစ်ခု တင်ပေးမယ်ဗျာ၊
အချက်အလက်စုံစုံ၊ ထောက်ပြကွက်စုံစုံနဲ့ ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ရှေ့မှာပါ “Code Yellow” လို့ပြထားရင် သူကြီးက ၂ ရက်(သို့) ၃ ရက်လောက် sticky ပေးပေးပါ။ အဲဒီ့ ၂ ရက်အတွင်း ထောက်ခံ comment ၂၀ လောက်ရလာလျှင်
sticky ဆက်ထားပေးပါ ။
ထောက်ခံ comment ၂၀ လောက်မှ မရရင် အဲဒီ့အဆိုကို sticky ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ
အဲဒီ့ ၂ ရက်(သို့) ၃ ရက် အတွင်း ကန့်ကွက် comment ၂၀ လောက်ရသွားရင်တော့ post တင်သူ post ပိုင်ရှင်ကိုပြန်လည် အရေးယူပေးတော့နော်။
(ထောက်ခံ/ကန့်ကွက် ကို comment တွေနဲ့သာ ပေါ်တင်ပေးရမှာဖြစ်လို့ ရွာသူ၊ ရွာသားတွေသာ လုပ်နိုင်မယ့်ကိစ္စဖြစ်သွားပါပြီ) အဆိုတင်ထားတဲ့အတိုင်း ထောက်ခံတဲ့ comment တွေ ၅၀ ခုလောက် ရသွားရင် အဲဒီ့ “ အနှောင့်အယှက် ပေးသူ” ဆိုတာသေချာသွားပါပြီ။ အဲဒီ့သူကို တစ်လ (သို့) နှစ်လ Block လုပ်ထားလိုက်စေချင်တယ်။
(အများညှိပြိး ဥပဒေဆွဲကြရအောင်၊ သူကြီးကို တာဝန်မပိစေလိုပါ)
(ကျနော့်သဘောကတော့ တစ်ခါတည်း အပြီးပိတ်ပစ်လိုက်စေချင်တော့တာ အဲဒီ့သူ တခြား Account အသစ်နဲ့ ၀င်ရေးနိုင်သေးတာပဲလေ။ လောလောဆယ်တော့ ရွာ့အော့ကြောလန် မန်ဘာတစ်ယောက်ကြောင့် စိတ်ဒုက္ခရောက်ရတာတွေ ကင်းသွားမှာ အမှန်ဘဲ)
ရွာသူ၊ ရွာသားများလည်း ၀ိုင်းပြီး အကြံပေးကြပါဦး။
သူကြီးရဲ့ နှစ်လုံးပြူး ပန်းထိမ်မှာ ပြင်နေတုံးလေး ရွာထဲမှာ ရမ်းကားသူမရှိရအောင် ထိပ်တုံးလေးတော့ လုပ်ပေးထားချင်လို့ပါ။
ရွာကြီး သာယာသည်ထက်သာယာ၊ စည်ကားသည်ထက်စည်ကား အောင်လို့ ရွာရဲ့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ရွာသူ၊ ရွာသားအားလုံး ၀ိုင်းကြရအောင်ဗျို့၊
အရေအတွက် အကန့်အသတ်အတွက် Poll လေးဘဲ အရင်လုပ်ပေးပါလား သူကြီးရေ။ ၂၀ လား? ၅၀ လား? ၁၀၀ ရရင်လား?
အင်း.. … ပြောသာပြောနေရတာ…
ပန်းသီးပဲသုံးတယ်ဆိုတဲ့ သူကြီးသမီးကို မြင်ရနိုးနိုးနဲ့ ရွာကာလသားတွေများ အကြိုက်တွေ့သွားမလားဘဲ? ……….
ထိပ်တုံးအခတ်ခံထားရသူကို သူကြီးအိမ်ကဘဲ တာဝန်ယူပြီးကျွေးထားမယ်ဆို သူကြီးစားသလို ကိုဘေးအမဲသားကင်နဲ့ …… အဟီး…..
ကျနော် လေးစားရတဲ့၊ ခင်တွယ်ရတဲ့၊ မမြင်ဘူးသေးတဲ့ မန္တလေးဂေဇက်က ရွာသူ၊ရွာသားတွေကို တကယ်နှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်။ မေလလယ်လောက်ဆို အမိမြေကို ပြန်ရောက်ပါမယ်။
၂၀၀၀ အုပ်စုမှာ လုပ်အားအလှူပြုဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ကြိုကြား၊ ကြိုကြား comment လေးတွေတော့ ပေးခွင့်ပြုပါ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနေ့ ရောက်ရင်သာ…
ရော် ဒီလူတော့ ခက်ခြင်း ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဖွင့်ဆိုနေပြန် ပါပကောလား ။
လူလေး Swal Taw Ywet ရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်ပါရဲ့ ။
လူလေး သိသင့်သိထိုက်သင့်တာက ကြယ် ၂ ပွင့် ဖြစ်အောင် ပို့စ် ကောင်းကောင်း
များများ တင်သာတင်ပါလေ ။
ဆြာဂီး ဖစ်အောင်လုပ်ပါလေ ။ အဲ့သဟာ ဆိုရင်ဖြင့် လူလေး စိတ်ထဲရှိရာကို
ကိုကြောင်ကြီး အသို့ငှာ အာဏာ သိမ်းပြီး သကာလ စိတ်ထဲရှိရာ
စည်းကမ်း ချက်များကို ထုတ်ပါလေ ။
ယ္ခု သော်ကား သဂျီး ကိုယ်တိုင် အိပ်ပျော်စားဝင် မိန့်မိန့်ကြီး အခွင့်ပေးထား
ပါသဖြင့် အနှီ ကိစ္စမျိုးကို မည်သို့မျှ မစဉ်းစား မတွေးခေါ်ပါလင့် အမောင်လူလေး ။
စဉ်းစားပါက အနီရောင် ပန်းခင်းလမ်းသို့ ဆူးနင်းပြီး ဆက်လျှောက်ရမည်သာတည်း။
နေရာတိုင်း မှာလူစုံပေါ့ စွယ်တော်ရွက်ရေ။
ဒါကြောင့် လုံးနေတဲ့ ကမ္ဘာ အပေါ်မှာ Balance ဖြစ်အောင် နေနိုင်ကြတာလို့ တွေးလိုက်ပါ။ ;-)
ပန်းတိုင် မရောက်သေးပါဘူး ဟေ့။
တို့တွေ အင်အား လိုပါတယ်။
ဟား အရီးလတ် သုံးလုံးတောင်ဖြစ်သွားပြီ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်ပါ ဒါပေမယ့်သဂျီးက အဲဒီ့အလုံး
တွေရဲ့တန်ဖိုးကိုမရှင်းပြရသေးဘူးနော် ။ ကျွန်တော်ပဲမတွေ့လို့လားမသိ။ အရီးလတ်ရာထူးတိုး
ဟုတ်ကပြီ စွယ်တော်ရွက်ဆိုတာ ဘသူများပါလိမ့် သိသလိုလို ……
ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါလေ နှုတ်ဆက်ခွဲခွါ မလုပ်စေလိုပါ …
ကိုယ့်ရဲ့ အတိုင်းအတာတခု အထိ လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ အတူ လွတ်လပ်စွာနေထိုင်
ကျင့်သုံး စေလိုပါတယ် …
ကတိကဝတ်ပြုပါတယ် .. အမြဲ အားပေးနေမှာပါ …
အနှောင့်အယှက်ပေးသူရှိနေခဲ့ရင်တောင်မှ သူဟာသူနေ ကိုယ့်ဟာကိုယ်နေကြတာပေါ့ …
ကျွန်တော်က မိုးယံရွှေလမင်းနဲ့ မြတ်ဆုကဋေထီဆိုင်ကပါ
ကြီးမိုက် ဖုန်းနံပါတ်တော့ ရပြီ …
ချော်လေးယောင် ဆောင်ပြီး လှမ်းကလိဦးမှ …
သတိသာ ထားပေပေါ့ မိကြီးမိုက်ရေ …
Dear Brother, Ko Kyee Mite,
Yes, sure, I will contact you when I arrive back to Yangon
may be ( Second week of May, 2012 ).
By the way, where did you live in No2CWS ( BEME )?
We lived in Line No ( 50 ), ( A ) Company.
Wishing for you to be in good health and good wealth.
လားရှိုးသိန်းအောင် သီချင်းလေးနဲ့ မန့်မယ်ဗျာ။
ပျော်လို့မဆုံး ပြုံးလို့မ၀သေးတဲ့ ဒီအချိန်ဝယ်
တစ်ရပ်တစ်ကျေးနယ် အဝေးရယ် သူသွားမယ် ရုတ်တရက်ကွယ်
အသည်းထဲမှာ နာကျင်တယ် အချစ်ဆုံး ရယ် နှုတ်ဆက်ရင် ငိုချင်တယ်…
ဆိုလိုချင်တာကတော့ နှုတ်မဆက်နဲ့ ငိုချင်တယ် ပေါ့ဗျာ။
သူလည်း ရေးချင်ရာရေးပေါ့ဗျာ။ စိတ်ဝင်စားရင် ကွန်းမန့်ဝင်ရေးလိုက်ပေါ့။
ကိုယ်လည်း ရေးချင်ရာ ရေးပေါ့။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ ကွန်းမန့်ဝင်ရေးမှာပေါ့။
အီးဇီး …ပါ ဆရာ အီးဇီး…ပါ။
နှုတ်ဆက် လမ်းခွဲရက် သူရေ……..
တကယ်ကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပို့စ်ပါ။ပို့စ်တိုင်းကိုဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချိုပို့စ်တွေ၊ comment တွေကကိုစွယ်တော်ရွက်ပြောသလိုပါဘဲ………..ရွာ”နာ” တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဗျာ လက်ပြနှုတ်ဆက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့အုံး နေရာတိုင်းမှာအမြင်မတူနိုင်ကြတာမို့ ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါဗျာ။
ကိုဘလက်ချောပြောသလိုပါဘဲ “သူလည်း ရေးချင်ရာရေးပေါ့ဗျာ။ စိတ်ဝင်စားရင် ကွန်းမန့်ဝင်ရေးလိုက်ပေါ့။ ကိုယ်လည်း ရေးချင်ရာ ရေးပေါ့။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ ကွန်းမန့်ဝင်ရေးမှာပေါ့။”
မတူရင် မတုနဲ့လို့ ဆိုကြတယ် မဟုတ်လား။
ကိုယ်နဲ့ မတူတဲ့ သူတွေကို ဥပက္ခာပြုလိုက်ပါ။
ကျန်တဲ့ ခင်မင်နှစ်လိုဖွယ်ရာ ရွာသူားတွေရဲ့ မျက်နှာကို ထောက်ထားပြီး
ရွာကိုတော့ လက်ပြပြီး မနှုတ်ဆက်ပါနဲ့ဦး။
မမစွယ်တော်ရွက်ရေ ရွာတွေမှာ ရွာနာတယ်လို့ယူဆတဲ့အိမ်ကို ခဲနဲ့ဝိုင်းထုကြတယ်ဟုတ်
ဒီမှာလည်း အလားတူ အနီတွေပေးကြ ၀ိုင်းပြောကြသားပဲ
အဲ .. ကျနော့်အိမ်ကိုတော့ လာမထုနဲ့နော် pls;
ထိပ်တုံးကိစ္စကတော့ ဒီမိုသဂျီးပါဆို :neutral:
နှုတ်မဆက်ပါနဲ့ဦး အင်း .. ပြောမယ့်သာပြောရတာ
ဘာမှမပြောပဲ တိတ်တိတ်လေးပျောက်သွားတဲ့သူတွေလည်း အများသား
ဘာဘဲပြောပြောရွာထဲကို စရောက်တာ ၁လမပြည့်သေးပါဘူး ကိုကိုမမတွေနဲ့ပြောရတာ တကယ်ကိုစိတ်ပျော်ရွှင်ပါတယ် ရွာထဲကဘယ်တော့မှမထွက်ဘူး ရွာကကိုကိုမမ ညီမမောင်လေးတွေနဲ့ ခင်ခင်မင်မင် နေမယ် ဘယ်တော့အနီမပေးဘူးလို့လည်းဆုံးဖြတ်ထားတယ်
ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်နဲ့ ..
ဒီရွာကြီးရဲ့ ပျော်တော်ဆက် သာသာ အဆင့်ပါ …
အမြင့်ပိုင်းတွေကို တွေးလည်း မတွေးတတ်၊ ရေးလည်း မရေးတတ်သလို၊ ဖတ်လည်း မဖတ်တတ်၊ မန့်လည်း မမန့်တတ်ပါဘူး … ။ သို့ပေသိ ကြိုးစားဆဲ ပေါ့ …။
ဒါကြောင့် တစ်လုံးတည်း ပြောရရင် …
“အတိုဂျီးရယ် များတို့ကို ခွဲသွားပါနဲ့နော် ” .. လို့ ….
ဘာမှလည်း ဆိုင်ဘူးနော် … အဟီး ..
အို … ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် ဘာဖစ်လဲ …
မန့်ချင်လွန်းလို့ မန့်တာ ..
မကျေနပ် အသေသာ သတ်လိုက်တော့ …
ဒီလိုဘဲ ရွာထဲမှာနေပါများတော့ ပျော်ပျော်နေတတ်သွားတယ်
အခုဆို စိန်ပေါက်ပေါက်တို့ အံဇာတို့ ကြီးမိုက်တို့ဆို ကျွန်တော်ရဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေဗျ ( အပြင်မှာတော့ ကျွန်တော်ထက်အသက်ကြီးကြမယ်ထင်တယ်)
မကြာမကြာ လာလည်ပါအုန်းဗျာ ( စိန်ပေါက်စကား)
ခင်တဲ့ဖရဲ ( အခြောက်ဥက္ကထ)
စိတ်ကူး နဲ့ လက်တွေ့ တစ်ထပ်တည်း မကျတဲ့အခါ နာကျင်အောင် ခံစားတတ်ကြ
ရပါတယ်…၊ အဲဒီ နာကျင်မှုက ကိုယ့်ကိုကိုယ် အလဲထိုးတော့မှာ ….၊
မှတ်သင့်တာကို မှတ်၊ မေ့သင့်တာကိုမှတ်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ သင့်တာကို ပြောင်းလဲ
ပစ် နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးလို့ ထင်မိတယ်..။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ကိစ္စတစ်ချို့ကို ကိုယ်က မထိန်းချုပ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ထိန်းချုပ် နိုင်ဖို့ လိုတယ်ထင်တာပါပဲဗျာ…။။
ကိုစွယ်တော်ရွက်ရေ… ပို့စ်တွေကို ကွန်းမန့်မပေးဖြစ်ပေမယ့် ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်၊ ဆက်ရေးပါဦး အားပေးနေပါတယ်.. အနီတွေကိုတော့ စိတ်ထဲမထားပါနဲ့ မတူတဲ့ အမြင်တွေလို့ပဲ တွေးပေးလိုက်ပါ..
ကျွန်တော်က တိုက်လိုင်းနံပါတ် (၄၈)မှာနေခဲ့တာပါ
ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံက လလစ(၃၅၃)BEME ကိုပြောင်းခဲ့တာ..
ကိုစွယ်တော်ရယ် လက်ချောင်းတွေတောင်မညီကြတာ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စိတ်ဓါတ်ချင်းတူညီဖို့ဆိုတာများ
ဝေလာဝေးပေါ့ဗျာ လက်မကပုပေမယ့်လက်မကိုဖြတ်လို့မရ အဲလိုပဲလက်သန်းလေးကသိပ်အသုံးမများပါဘူး
ဆိုပြီး လက်သန်းကိုလည်းဖြတ်ထားလို့မရပါဘူး လောကမှာလူဆိုးလူကောင်းအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာ……
မတစ်ထောင်သားသမီးတွေပဲ စရိုက်အမျိုးမျိုးတော့ရှိမှာပါပဲ ဒါကိုသွားပြီးတွက်ချက်ပြနေရင် ကိုယ်လုပ်စရာ
ခဲ့တာမို့ အစ်ကိုတို့ကိုလေးစားအားကျသူတစ်ဦးပါ အစ်ကိုထွက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထောက်ခံခြင်းမပြုပါ
စာဖတ်သူဖြစ်တာထက် ကိုယ်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို စာဖတ်တဲ့သူတွေဆီချပြတယ်ဆိုတာတော်ရုံသတ္တိမျိုးနဲ့
လုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်တာဖြစ်လို့ သတ္တိတွေလျော့မသွားပါစေနဲ့လို ဆုတောင်းဆန္ဒပြုလျက်